ကြော်ဂေါ်ဖီထုပ် - ချက်ပြုတ်နည်းများ
jello ဖရုံသီးအမွှေးအကြိုင် pudding ချက်ပြုတ်နည်းများဒိန်ခဲ
ဝက်ပေါင်ခြောက်နှင့် mozzarella နှင့်အတူကျပ်ကြက်
ကြော်ဂေါ်ဖီထုပ် ငါ့အကြိုက်ဆုံးဘေးထွက်ပန်းကန်ချက်ပြုတ်နည်းများတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂေါ်ဖီထုပ်သည်ချို။ နူးညံ့ပြီးအရသာရှိသော smoky ဆားငန်သောအရသာကိုစုပ်ယူသည်။ အဆိုပါရလဒ်နှင့်အတူအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ရန်အလွန်ကြီးစွာသောရိုးရှင်းဘေးထွက်ပန်းကန်ဖြစ်ပါတယ် ကင်ကြက်သားရင်သား ဒါမှမဟုတ် ဝက်သား tenderloin !
တောင်ပိုင်းကြော်ဂေါ်ဖီထုပ်သည်နှေး။ ချက်ပြီးချက်ပြုတ်သည်။ သီးဖျော်ရည်များတွင်ဘေကွန်နှင့်ကြက်သွန်နီ (ကျွန်ုပ်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကြက်သွန်ဖြူလေးညှင်းပွင့်ထည့်သည်) နှင့်၎င်းသည်အခြားအရသာရှိသောဟင်း၊
ကြက်သား Cordon အပြာနှင့်အတူအဘယ်သို့ဆိုင်
သငျသညျယောက်ျားတွေငါကနေဂေါ်ဖီထုပ်နှင့်အတူမည်သည့်အရာနှင့်အရာခပ်သိမ်းကိုချစ် လွယ်ကူသောဂေါ်ဖီထုပ်လိပ် ကျန်းမာရန် ဂေါ်ဖီထုပ်ဟင်းချို ။ ပိုလန်အဖွားနဲ့ကြီးပြင်းလာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ဟာဂေါ်ဖီထုပ်အမျိုးမျိုးကိုအမြဲတမ်းရရှိခဲ့တယ်၊
ဂေါ်ဖီထုပ်ကြော်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ချက်ပြုတ်လျှင်နှေးပြီးနှေးပါကနူးညံ့။ ချိုလာလိမ့်မည်။
ပြတ်သားသည်အထိဘေကွန်ကြော်။ ချက်ထားသောဘေကွန်ကိုဖယ်ရှားပြီး yummy drippings များကိုဒယ်အိုးထဲတွင်ထားခဲ့ပါ။
ကြက်သွန်နီကိုထည့်ပြီးနူးညံ့သည့်တိုင်အောင်ဘေကွန်ချော်တွင်ချက်ပြုတ်ပါ (ဤသည်မှာအရသာအများဆုံးရှိသည်) ။
နောက်ဆုံးတွင်ဂေါ်ဖီထုပ်ကိုမွှေပါ။ ချက်ပြီးချက်။ ချက်ပြုတ်ပါ။ မိနစ် ၂၀ ခန့်နှေးပါ။
မြည်းစမ်းဖို့ဆား, ငရုတ်ကောင်းနှင့်ငရုတ်သီးအလွှာနှင့်အတူရာသီ။ crispy ဘေကွန်နှင့်အတူထိပ်တန်းပူအစေခံ။
အရသာများနှင့်ဖြည့်စွက်မှုများဖြင့်ဖန်တီးမှုကိုရယူပါ၊ ကြော်ထားသောဂေါ်ဖီထုပ်နှင့်ဘေကွန်ထက် ကျော်လွန်၍ စဉ်းစားပါ။ သံပုရာတစ်ညှစ်, parmesan ဒိန်ခဲတစ်ဖြန်းထည့်ပါ။ ကုန်တယ်စိမ်းလန်းသောငရုတ်ကောင်းကြော်, ကြက်သွန်နီနှင့်အတူထည့်ပါ ကျန်ရှိသောဖုတ်ဝက်ပေါင်ခြောက် သို့မဟုတ် capers ။ ဖြစ်နိုင်ခြေအဆုံးမဲ့များမှာ!
crock အိုးထဲမှာ cob အပေါ်ပြောင်းဖူးအေးခဲ
ဒယ်အိုးအရွယ်အစား၊ သင်အသုံးပြုသည့်ဂေါ်ဖီထုပ်ပမာဏနှင့်ဒယ်အိုးထဲတွင်ရှိသောအရာများအပေါ်မူတည်သည်။ အလယ်အလတ်အပူ၌ချက်ပြုတ်သောအခါဂေါ်ဖီထုပ်သည်အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်သည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုသင်ကိုယ်တိုင်နှစ်သက်သည်။ သင်ချက်ပြုတ်လေကြာလေလေနှေးလေလေဖြစ်လိမ့်မည်။
ပျော့ပြောင်းစေရန်မိနစ် ၂၀ ခန့်ကြာသည်။ သို့သော်၊ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြော်သောစတိုင်သည် ၁၀ မိနစ်ခန့်သာကြာလိမ့်မည်။ စမ်းသပ်နှင့်ကပျော်စရာရှိသည်။
လှော်ဂေါ်ဖီထုပ်ကင်စာရွက် - အလွန်ကြီးစွာသောဘေးထွက်ပန်းကန်
Braised အနီရောင်ဂေါ်ဖီထုပ် - ရောင်စုံနှင့်ပျော်စရာ!
ဂေါ်ဖီထုပ်မှ Ultimate လမ်းညွှန် - သင်သိရန်လိုအပ်သမျှ
Colcannon စာရွက် (ဂေါ်ဖီထုပ်နှင့်အာလူး) - ဂန္ထဝင်!
Crock Pot ဂေါ်ဖီထုပ် Roll ဟင်းချို - အလွန်အမင်းလွယ်ကူသည်
ပြင်ဆင်ချိန်၁၀ မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၂၅ မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၃၅ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၄ စားသုံးခြင်း စာရေးသူHolly Nilsson ကြော်ဂေါ်ဖီထုပ်ကငါ့အကြိုက်ဆုံးချက်ပြုတ်နည်းတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ဂေါ်ဖီထုပ်သည်အတူတူကြော်သောအခါဘေကွန်အရသာအားလုံးကိုစုပ်ယူသည်၊ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢တစ်ခု ကြက်သွန်နီ အရက်
▢၆ ခွက် ဂေါ်ဖီထုပ် core ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ကုန်တယ်
▢¼ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ငရုတ်ကောင်းအနီရောင်အလွှာ သို့မဟုတ်အရသာအတွက်
ပြတ်သားသည်အထိအလယ်အလတ်အပူကျော်ဘေကွန်ကြော်။ တစ် slotted ဇွန်းနှင့်အတူဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ဘေးဖယ်ထား။
ကြက်သွန်နီကို bacon ယိုထည့်ပြီးနူးညံ့သည့်အထိချက်ပြုတ်ပါ။
ဂေါ်ဖီထုပ်အတွက်နှိုးဆော်နှင့် 18-20 မိနစ်သို့မဟုတ်နူးညံ့သည်အထိချက်ပြုတ်။
မြည်းစမ်းဖို့ဆား, ငရုတ်ကောင်းနှင့်ငရုတ်သီးအလွှာနှင့်အတူရာသီ။ ဘေကွန်အတွက်နှိုးဆော်နှင့်အစေခံ။
သော့ချက်စာလုံးကြော်ဂေါ်ဖီထုပ် သင်တန်းအရံဟင်း ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုကော်ပီကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။